Panasonic Lumix Digital Camera DMC-FT30 (Blue) ~ ICT.com.mm
HomePanasonic Lumix Digital Camera DMC-FT30 (Blue)
Panasonic Lumix Digital Camera DMC-FT30 (Blue)
Panasonic အမှတ်တံဆိပ် Lumix Digital Camera DMC-FT30 ဖြစ်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းကင်မရာတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ Digital ကင်မရာတွေကိုတော့ ပစ်ပယ်လို့မရသေးပါဘူး။ ဒီ Panasonic ကင်မရာဟာ ပုံမှန်မြို့တွင်းလှည့်လည်ရိုက်ကူးမှုတွေအတွက်သာမက Outdoor ရိုက်ကူးမှုတွေအတွက်ပါ အဆင်ပြေအောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ တကယ့်ကိုအကြမ်းခံတဲ့ Digital Camera အမျိုးအစားထဲမှာ ပါဝင်ပြီး ရေအနက် ၈ မီတာ (၂၆) ပေအထိ အသုံးပြုနိုင်တာကြောင့်... [Learn more]
Panasonic အမှတ်တံဆိပ် Lumix Digital Camera DMC-FT30 ဖြစ်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းကင်မရာတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ Digital ကင်မရာတွေကိုတော့ ပစ်ပယ်လို့မရသေးပါဘူး။ ဒီ Panasonic ကင်မရာဟာ ပုံမှန်မြို့တွင်းလှည့်လည်ရိုက်ကူးမှုတွေအတွက်သာမက Outdoor ရိုက်ကူးမှုတွေအတွက်ပါ အဆင်ပြေအောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ တကယ့်ကိုအကြမ်းခံတဲ့ Digital Camera အမျိုးအစားထဲမှာ ပါဝင်ပြီး ရေအနက် ၈ မီတာ (၂၆) ပေအထိ အသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် လှပတဲ့ရေအောက်ရိုက်ချက်တွေကို ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ အမြင့် ၅ ပေအထိ ပြုတ်ကျမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး -10℃ အထိ ရေငွေ့ရိုက်ခြင်း၊ အေးခဲခြင်းမရှိပါဘူး။ Time Lapse Shot နဲ့ Creative Panorama ရိုက်ကူးမှုကဲ့သို့သော ရိုက်ချက်တွေအပြင် အခြားသော ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Filter Effects တွေလည်း အများအပြားပါဝင်ပါတယ်။ စူးရှတဲ့ ကင်မရာမီးပါဝင်ပြီး ညဘက်ဓာတ်ပုံ/ဗီဒီယိုရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာ ကောင်းမွန်လှပတဲ့ရုပ်ထွက်ရရှိဖို့ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သလို သာမန်ဓာတ်မီးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ 16.1 MP ရှိ ကင်မရာကို တပ်ဆင်ပေးထားပြီး HD နဲ့ STD အရည်အသွေးရှိ ဗီဒီယိုတွေကို MP4 Format ဖြင့် ရိုက်ကူးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Camera Pixels: 16.1 Megapixels, HD Video : 1280 x 720 pixels, 25 fps (HD: 10Mbps/ MP4), STD Video : 640 x 480 pixels, 25fps (VGA: 4Mbps/ MP4), Shockproof: up to 1.5m/ 5ft, Mega Optical Image Stabiliser with Active Mode, HD Video in MP4, 2.7″ 230K-dot LCE
The LumiX DMC-FT30 offers extra toughness by extending its waterproof performance to 8m/ 26ft. A variety of special modes, including Time Lapse Shot and Creative Panorama, andahost of attractive filter effects, are added to expand the shooting experience. Enjoy easy, casual shooting with style booth in town and during outdoor adventures. This model is optimal for both. Shockproof up to 1.5m/ 5ft, Freezeproof Down to 10ံC. 14 ံF, Dustproof.